Semalt Inotsanangura Top Web Data Scraper Tools
Kukwezva kwewebhu kunosanganisira kutsvaga zvitsva uye zviripo zvewebsite uye kuchichengetedza mune yekutsvaga injini databases kuitira nyore kuwana. Ichokwadi kuti webhuteri dzekugadzira webhu huri kuwana mukurumbira nenguva nokuti mushambadzi wewebhu wakashandura uye akareruka yose yekugadzirisa nzira yekuita kuti web data yedhairirano iwanikwe kune vose vanoshandisa paIndaneti. Zvimwe zvekugadzira zvigadzirwa zvewebhu zvinoita kuti vashandisi varondedze kana kutamba nzvimbo dzavo kana mablogi nenzira dzakanaka uye dzinobatsira pasina chero chidikanwi chetsamba - moia rtb 55. Vanoshandurawo data yacho muzvimiro zvakasiyana uye inoenderana nezvinodiwa nevashandisi.
Pano takakurukura zvimwe zvishandiso zve web webpower tool kuti tione mawebhusayithi ne blogs.
Cyotek WebCopy inobatanidza nzvimbo yakasununguka, yakasununguka yekuchengetedza nzvimbo iyo inokubvumira kunyorera nzvimbo yakasarudzwa kana kuti yakazara munzvimbo yako padzimba yako kuitira kuti iwe uverenge kana pasina internet hukama. Iyi purogiramu inotsvaga mawebsite akatsanangurwa vasati vatora deta yayo kana zvinyorwa kune imwe yakanyanya diski. Iyo inoshandurawo hukama kune zvinhu zvakadai semifananidzo, mapeji ewebhu, uye zvinyorwa zvepasi pepaiti, uye isingabatanidzi zvikamu zvewebhu imwechete iyo isingatauri chinhu kune injini yekutsvaga.
HTTrack chirongwa chepachena chinopa mabasa akasiyana-siyana uye sarudzo dzakakodzerwa nekukanda nzvimbo yose kubva paIndaneti kuenda kune kombiyuta yako kana foni..Zvimwe zvezvinyorwa zvaro zvakakurumbira ndezveWindows, Sun Solaris, Unix, uye Linux. Iyi purogiramu inobatsira mirror yako nzvimbo kanopfuura kamwechete uye inobatsira webhuhu yekutamba nzira nyore uye nokukurumidza. Iwe unogonawo kuwana ruzivo rwezvifananidzo, mafaira, HTML ma code, zvinyorwa, uye zvinogona kuvhara kubudiswa chero nguva, chero kupi zvako.
Octoparse iine simba, isina mahwendefa ewebhu inoshandiswa kubvisa zvinyorwa zvose zvaunoda kubva panzvimbo yako. Iyi purogiramu inoshandisa nzira mbiri dzekutsvaga webhusaiti yako nenzira iri nani uye ine mabasa akawandisa ekubatsirwa. Maitiro ayo maviri anozivikanwa ndeye Advanced Mode uye Wizard Mode, izvo zvakakosha kuti vashanduri vashandise kuChitparse munguva yega. Iwe unogona kukopa saiti yako mukati memasekondi uchishandisa iri rakanyora. Uyezve, unogona kuchengetedza nzvimbo yacho mune zvakasiyana-siyana zvakarongeka zvakadai seExcel, HTML, uye text.
Getleft iri purogiramu isingashandisi yekushandisa iyo inobatsira kunyora bhurosi kana site pakarepo. Ichakwanisa kukopa nzvimbo yako yose uye ine zvakawanda zvaungasarudza kuti ubatsirwe. Iwe unogonawo kupinda URL uye sarudza mafaira waungada kuakanda ku kombiyuta yako. Iyi purogiramu ndeimwe yepamusoro nokuti inouya mumitauro 15 yakasiyana, ine 24/7 kutsigirwa, uye inoita kuti ruzivo rwako rwekutsvaga ruve rwakanaka uye runoshamisa.
The Scraper inozivikanwa zvikuru yeC Chrome ine zvinyorwa zvishoma zvekutsvaga zvinyorwa asi zvinobatsira pakuita tsvakurudzo yepaIndaneti zviri nyore. Inotumirawo data yako kuGoogle Spreadsheets panzvimbo yekombiyuta yako, kuchengetedza nguva yakawanda. Scraper inogona kusanganiswa ne web browser yako uye ichaita nzira duku dzekutsanangura URL yako kune injini yekutsvaga.